Ihe ndozi ọkụ, Edison Bulbs, eriri igwe - Omita Lightig
Mee ka ọrụ anyị na Uru nke ọkụ bụrụ nke gị.
Isi Azụmaahịa na Ntụkwasị Obi Base Ntụkwasị Obi Na Acmara.
Omita Lightig na Registered hụrụ 20million RMB achọtara na 2009. Dịka onye nrụpụta pụtara ìhè, onye nrụpụta na onye na-ebupụ ọkụ ọkụ ọkụ na Edison bulbs, ngwaahịa na ọrụ anyị na-akwado ndị ahịa ụwa niile. Anyị nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe abụọ nke dị na Dongguan City na 6000M2 Factory arụ ọrụ, ebe nchekwa 2000M2 na ebe ngosi 400M2. Anyị nwekwara a ọkachamara otu si emebe, n'ichepụta na QC na-achịkwa, na Marketing na ahịa otu. Ngwaahịa na ọrụ anyị na-agbasawanye na mba 27, Europea na USA dị ka Isi Market, mana anyị nwekwara azụmahịa na mba ndị ahụ na-emepe emepe dị elu gụnyere Brazil, Chile na South Africa, Nigeria, Malaysia. Imirikiti ngwaahịa anyị bụ CE Rohs asambodo, ma n'ezie nwekwara UL na SAA.
Omenala Lighting & News
Nweta mmụọ site n’ihe anyị gosipụtara n’ebe a
Sere n'elu pendant crystal oriọna-Fr ...
Algọridim bụ ngosipụta nke mgbakọ na mwepụ uri nke okike. imewe ọkụ site na Toan nguyen ， bụ ìgwè kpakpando nke ụwa niile yiri ka ha na-efegharị na mbara igwe dịka igwe atụrụ nke nnụnụ, ma ọ bụ mmiri ozuzo oyi kpọnwụrụ. atụmatụ a na-enye ihe anaghị agwụ agwụ nke oriọna nwere ike kwụsịtụrụ na d ...
Linear Pendant lamp na S14s ihe ...
Na mbu, S14s (pin abụọ), na S14d (otu pin) bụ imewe maka ụfọdụ nnukwu enyo. Nọmalị, e nwere 300mm, 500mm, na 1000mm maka S14s (abụọ atụdo), na S14d (one pin) linear lamp, na ha niile nwere ike ịbụ doro anya version na opal version. Lee, m depụtara ihe anyị na-eme na ogbako ...
Laghachi na mbụ Edison bọlbụ pu ...
N’afọ 1809, Englisg mepụtara Humphry Davy mepụtara ọkụ latrik mbụ. O jikọtara okporo osisi nke icheku ọkụ, nke bụ ihe mejupụtara carbon, na batrị nwere waya abụọ. Ọ bụ ezie na ọkụ ahụ adịteghị aka, o gosipụtara na ụfọdụ ihe ghọrọ ihe na-ekpo ọkụ nke na ha na-enwu mgbe ọkụ eletrik pa ...
Kedu ka ọkụ UV si arụ ọrụ
Tupu ịza ajụjụ a, lee ihe bụ ọkụ UV. Nke mbụ, ka anyị tụlee echiche nke UV. UV, ma ọ bụ ultraviolet, ma ọ bụ ultraviolet, bụ ebili mmiri electromagnetic nke nwere ntụgharị n'etiti 10nm na 400nm. UV nke egwu egwu dị iche iche nwere ike kewaa UVA, UVB na UVC. UVA: na wavelength bụ lo ...
Omenala ọkụ matte ọcha na ...
N'ime ụlọ, ụlọ, anyị nwere ike ịhụ agba ọcha mgbe ọ bụla, mgbidi ọcha, ala mabul ọcha, ogidi ọcha. Otú ọ dị, ọcha nwere ike ịdị iche, dị iche na omimi nke agba, ọcha dị ọcha, na-acha ọcha, matte ọcha, ezigbo ọcha. Taa, anyị ga-atụle ihe mere matte ọcha ji ahọrọ ndị ọcha ....
You chọrọ kmow ọzọ banyere anyị ma ọ bụ ngwaahịa anyị？